Saudi Arabia inorambidza vagari vasina kuvharwa kuenda kubasa
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Kuputsa Saudi Arabia Nhau » Saudi Arabia inorambidza vagari vasina kuvharwa kuenda kubasa
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Saudi Arabia Nhau • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hurumende Nhau • Health News • Kodzero Dzevanhu • nhau • Kuvakazve • Kutarisirwa • ushanyi • Tourism Kutaura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Zvakavanzika Zvokufamba • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
Kugashira joni rekudzivirira coronavirus chichava chinhu chinodiwa pakuvapo kwevashandi munzvimbo yebasa kumatunhu ese
Zviremera zveSaudi zvinokurudzira vagari kuti vagadzirire kubaiwa nhomba
Vanachiremba veSaudi vakapa anopfuura mamirioni gumi emishonga yekudzivirira kusvika pari zvino
Vhiki rapfuura, Saudi Arabia yakasarudza kurambidza vagari vasina kuvharirwa kuenda kunze kwenyika
Saudi Arabia's Ministry of Human Resources uye Zvemagariro Ekuvandudza yakazivisa kuti vagari vehumambo vasina kubaiwa jekiseni re COVID-19 vanorambidzwa kuenda kubasa.
"Kugashira chirwere checoronavirus jab chichava chinhu chinodiwa pakuvepo kwevashandi munzvimbo yebasa kumatunhu ese - everuzhinji, akazvimirira nemasangano anoyamura," akazivisa vakuru veSaudi. Naizvozvo, zviremera zvinokurudzira vagari kuti vagadzirire kupora.
Zuva chairo remitemo mitsva iri kutanga kushanda harisati raziviswa. Bazi iri rakavimbisa kurizivisa munguva pfupi inotevera, pamwe nekujekesa kuti mitemo ichatsigira sei.
Mukupera kwesvondo rapfuura, Saudi Arabia yakafunga kurambidza vagari vasina kuvharirwa kuenda kunze kwenyika. Kubva musi waMay 17 wegore rino, chete avo vakabaiwa jekiseni rimwe chete kana maviri mazuva gumi nemana rwendo rwacho rusati rwasvika ndivo vachakwanisa kubva munyika.
Parizvino, vanachiremba veumambo vakapinza zvinopfuura mamirioni gumi dhizaini mukati mehuwandu hweSaudi Arabia huwandu hwevanhu mamirioni makumi matatu nemana.